Den blomstertid nu kommer: The Unthinkable (2018) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ဆှီဒငျရုပျရှငျလောကရဲ့ အကောငျးဆုံးလို့ပွောရမယျ့ထှနျးပေါကျအောငျမွငျခဲ့တဲ့ ဆှီဒငျဇာတျကားကောငျးလေးပဲဖွဈပါတယျRating7ရရှိထားပွီးတော့ ကွာမွငျ့ခြိနျ ၂ နာရီကြျောကိုအပွညျ့အဝကွညျ့ရမယျ့အလှနျတရာမှလညျး သဘာဝကတြဲ့ ကားကောငျးလေးတဈကားပါ
ဇာတျလမျးပုံစံကတော့ ကိုရီးယားရုပျရှငျလောကမှာ မှတျကြောကျတဈခုတငျနိုငျခဲ့တဲ့“Train to busan “လို နိုငျငံတဈဝှမျးမှာ ကပျဆိုးကရြောကျပွီး အသကျရှငျသနျဖို့အတှကျ ရုနျးကနျခဲ့ရတာတှကေို ရိုကျပွထားတဲ့ ဇာတျလမျးအသှားအလာမြိုးပါပဲ……….
ဇာတျကားအစမှာ ဇာတျရှိနျနညျးနညျးအေးတယျဆိုပမေယျ့တဖွညျးဖွညျးဇာတျရှိနျ မွငျ့တကျလာအောငျဆှဲချေါသှားတာတှရေ့မှာပါ ………ဇာတျညှနျးလေးကို မပွောခငျမှာ ….ဆှီဒငျနိုငျငံရဲ့ နောကျခံအခကျြအလကျလေးတှကေို ပွောပွခငျြပါသေးတယျ…..
ဆှီဒငျနိုငျငံဟာ ဥရောပတိုကျမှာ တညျရှိပွီးတော့မွို့တျောကတော့ စတော့ဟှနျးမွို့ပါလူဦးရအေားဖွငျ့ ၁၀ သနျးကြျောတညျရှိပွီး နိုငျငံတျောကာကှယျရေးအတှကျအမွဲတမျးတပျဖှဲ့ဝငျကတော့ စဈသညျ ၂သောငျးကြျောပဲ ခနျ့အပျထားပါတယျ
နိုငျငံအတှကျ လိုအပျလာရငျတော့ လူဦးရေ ယောကျြား၊မိနျးမပေါငျးသိနျး ၅၀ကြျောလောကျကို စဈမှုထမျးဆောငျဖို့အတှကျ အရနျသငျ့လြာထားတာ ရှိပါတယျအခုလို ကပျဆိုးဖွဈလာပွီး ထိခိုကျနဈနာမှုမွနျဆနျတဲ့အခါ ဆိုရငျတော့အမွဲတမျးတပျဖှဲ့ဝငျ စဈသား ၂သောငျးကြျောလောကျနဲ့ ပွညျသူ ၁၀သနျးကိုကာကှယျပေးဖို့ ဆိုတာ တျောတျောခကျခဲမယျဆိုတာကို မှနျးဆမိမှာပါ….
ကူးစကျမှုမွနျဆနျစှာနဲ့ ဆှီဒငျနိုငျငံထိပျသီးအစိုးရအဖှဲ့ဝငျအားလုံးအရငျဆုံးကဆြုံးသှားခဲ့မယျဆိုရငျတော့ နိုငျငံတဈခုလုံး ပရမျးပတာဖွဈသှားမှာပါ …….ဇာတျညှနျးလေးကို ပွောပွရရငျတော့…..ဆှီဒငျနိုငျငံရဲ့အထိမျးအမှတျနတေ့ဈခုဖွဈတဲ့ MidSummer Dayနမှေ့ာ ဖွဈခဲ့တာပါ
ဘာအကွောငျးအရငျးကွောငျ့မှနျးမသိဘဲ ကောငျးကငျတဈခုလုံးကဌကျတှေ မွပွေငျပျေါပွုတျကြ သဆေုံးလာတာကနအေစပွုပွီးတော့နိုငျငံတဈခုလုံး ကပျဆိုးဝငျခဲ့တာပါကိုယျခဈြခငျရတဲ့သူတှေ ကိုယျရငျးနှီးတဲ့သူတှေ ကူးစကျခံရတာကိုကယျတငျနိုငျခွငျးမရှိဘဲ ဆှီဒငျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျတှကေိုယျတိုငျပကျြစီးယိုယှငျးသှားတဲ့အတှကျ ကယျသူမဲ့တဲ့ အခွအေနမှောကိုယျအသကျရှငျဖို့ ကိုယျတိုငျရုနျးကနျကွရငျးတဦးနဲ့တဦးဖေးမကူညီပွီး ရငျဆိုငျရပါတော့တယျ…
ကဲ…အဲ့ဒီတော့ အားလုံးအနနေဲ့ ဘယျလို ကပျရောဂါဆိုးကွောငျ့ဆှီဒငျအစိုးရအပါအဝငျ ပွညျသူအားလုံး ဒုက်ခရောကျခဲ့ကွသလဲပွီးတော့ ဘယျသူတှကေ သခြောအကှကျခပြွီးဆိုးရှားမှုတှကေိုဖနျတီးခဲ့တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပိတျကားပျေါမှာဆကျလကျရှုစားကွပါ….
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဆွီဒင်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ အကောင်းဆုံးလို့ပြောရမယ့်ထွန်းပေါက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဆွီဒင်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်Rating7ရရှိထားပြီးတော့ ကြာမြင့်ချိန် ၂ နာရီကျော်ကိုအပြည့်အဝကြည့်ရမယ့်အလွန်တရာမှလည်း သဘာဝကျတဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ
ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကမှာ မှတ်ကျောက်တစ်ခုတင်နိုင်ခဲ့တဲ့“Train to busan “လို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ကပ်ဆိုးကျရောက်ပြီး အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းအသွားအလာမျိုးပါပဲ……….
ဇာတ်ကားအစမှာ ဇာတ်ရှိန်နည်းနည်းအေးတယ်ဆိုပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းဇာတ်ရှိန် မြင့်တက်လာအောင်ဆွဲခေါ်သွားတာတွေ့ရမှာပါ ………ဇာတ်ညွှန်းလေးကို မပြောခင်မှာ ….ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ နောက်ခံအချက်အလက်လေးတွေကို ပြောပြချင်ပါသေးတယ်…..
ဆွီဒင်နိုင်ငံဟာ ဥရောပတိုက်မှာ တည်ရှိပြီးတော့မြို့တော်ကတော့ စတော့ဟွန်းမြို့ပါလူဦးရေအားဖြင့် ၁၀ သန်းကျော်တည်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတော့ စစ်သည် ၂သောင်းကျော်ပဲ ခန့်အပ်ထားပါတယ်
နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်လာရင်တော့ လူဦးရေ ယောက်ျား၊မိန်းမပေါင်းသိန်း ၅၀ကျော်လောက်ကို စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် အရန်သင့်လျာထားတာ ရှိပါတယ်အခုလို ကပ်ဆိုးဖြစ်လာပြီး ထိခိုက်နစ်နာမှုမြန်ဆန်တဲ့အခါ ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင် စစ်သား ၂သောင်းကျော်လောက်နဲ့ ပြည်သူ ၁၀သန်းကိုကာကွယ်ပေးဖို့ ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကို မှန်းဆမိမှာပါ….
ကူးစက်မှုမြန်ဆန်စွာနဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံထိပ်သီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးအရင်ဆုံးကျဆုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတစ်ခုလုံး ပရမ်းပတာဖြစ်သွားမှာပါ …….ဇာတ်ညွှန်းလေးကို ပြောပြရရင်တော့…..ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့အထိမ်းအမှတ်နေ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MidSummer Dayနေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ
ဘာအကြောင်းအရင်းကြောင့်မှန်းမသိဘဲ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကဌက်တွေ မြေပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျ သေဆုံးလာတာကနေအစပြုပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုလုံး ကပ်ဆိုးဝင်ခဲ့တာပါကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေ ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေ ကူးစက်ခံရတာကိုကယ်တင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆွီဒင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်တိုင်ပျက်စီးယိုယွင်းသွားတဲ့အတွက် ကယ်သူမဲ့တဲ့ အခြေအနေမှာကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ကြရင်းတဦးနဲ့တဦးဖေးမကူညီပြီး ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်…
ကဲ…အဲ့ဒီတော့ အားလုံးအနေနဲ့ ဘယ်လို ကပ်ရောဂါဆိုးကြောင့်ဆွီဒင်အစိုးရအပါအဝင် ပြည်သူအားလုံး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသလဲပြီးတော့ ဘယ်သူတွေက သေချာအကွက်ချပြီးဆိုးရွားမှုတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်ရှုစားကြပါ….